လူးဝစ် Martinez | | ခရီးသွားနေရာများ, Espana, ခရီးသွား
ဘာစီလိုနာသည်လက်ရှိတွင်ရှိသည် နာမည်ကျော်နှင့်ကြိုဆိုပွဲ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်ကြွယ်ဝသောheritageရာမအမွေအနှစ်များကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အတိတ်က၎င်း၏တောက်ပမှုကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ ဆin္ဌမမြောက်လူ ဦး ရေအများဆုံးဥရောပမြို့ဖြစ်ပြီး Gothic အဆောက်အ ဦး များကိုအံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် Gaudi နှင့် Avant-garde အဆောက်အ ဦး များပေါများသောနေရာများနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနေရာများစွာရှိသည်။
1.2 Montjuic တောင်တန်း
1.3 Casa Milà, Sagrada Familia နှင့်အန်တိုနီယိုGaudí၏အခြားဖန်တီးမှုများ
ဘာစီလိုနာမှသင့်အားကမ်းလှမ်းသည့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ၊ ပြတိုက်များနှင့်အခြားနေရာများမှာအလွန်ကြီးမားသည်။ သို့သော်သင်တွေ့မြင်ရမည့်သူများစွာရှိပါသည်။ သူတို့ကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
တရား ၀ င်သတ်မှတ်ထားသော Santa Iglesia Catedral Basilica Metropolitana de la Santa Cruz y Santa Eulalia အမည်ရှိသည်မှာ၎င်းသည်လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည် Gothic ဗိသုကာ။ ၁၃ ရာစုမှ ၁၅ ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း၎င်း၏မျက်နှာစာသည် ၁၉ ရာစုတွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ချာ့ချ်များအနက်စန်တာလူစီယာတစ်ခုသည်ထူးခြားထင်ရှားပြီး၎င်းသည်နှောင်းပိုင်းရောမလက်စ်နှင့်ပိုင်သည် Santo Cristo က de Lepanto ၏အလွန်အမင်းမွို့၌လေးစား။
သို့သော်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်၏အထင်ရှားဆုံးအပိုင်းများထဲမှတစ်ခုမှာဖြစ်သည် ၎င်း၏ cloisterရှေးခေတ်ဓမ္မသစ်နှင့်ဓမ္မသစ်တို့မှုတ်သွင်းထားသောပန်းပုများနှင့်နဂါးကိုတိုက်ခိုက်နေသောစိန့်ဂျော့ဂ်ျဒဏ္theာရီတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည်။
အဆိုပါ basilica န်းကျင်အတိအကျဖြစ်ပါတယ် Gothic ရပ်ကွက် Portal del Ángel, Episcopal Palace သို့မဟုတ် Plaza Real စသည့်အခြားအံ့ဖွယ်ရာများကိုတွေ့နိုင်သည့်ဘာစီလိုနာမှ။ ရှေးဟောင်းဂျူးရပ်ကွက်နှင့်အလယ်ခေတ်နံရံများကဲ့သို့သောသမိုင်းဝင်ရုပ်ကြွင်းများကိုလည်းတွေ့ရသည်။
၁၉၂၉ ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲအခမ်းအနားအတွက်၎င်းကိုဆောက်လုပ်ခဲ့သည် Montjuic တောင်တန်း ယနေ့ဘာစီလိုနာတွင်အထင်ရှားဆုံးသောအဆောက်အ ဦး များဖြစ်သည်။ သူတို့တွင်အိုလံပစ်အားကစားကွင်းကိုကြည့်ရမည် စပိန်ရွာစပိန်နိုင်ငံ၏ဒေသအားလုံးတွင်အဆောက်အအုံ ၁၁၇ ခုပါ ၀ င်သည်။
သို့သော်အားလုံးအထက်တွင်သင်သည်အထင်ကြီးလေးစားခြင်းခံရလိမ့်မည် အမျိုးသားနန်းတော်, Renaissance ၏ဗိသုကာနှင့်ဆင်တူတစ် ဦး ဂန္ထဝင်စတိုင်ဖြင့်တည်ဆောက်နှင့် Noucentista စတိုင်အများအပြားအကျင့်ကိုကျင့်အိမ်။ ထိုမျှမကအံ့သြဖွယ်မဟုတ်တ ဦး တည်းလည်းသင့်ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းလိမ့်မယ် မှော်စမ်းရေတွင်း, အဘယ်သူ၏ရေညအချိန်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုထွန်းလင်း။
Casa Milà, Sagrada Familia နှင့်အန်တိုနီယိုGaudí၏အခြားဖန်တီးမှုများ
အကယ်၍ ဘာစီလိုနာသည်ပါရမီရှင်များစွာအတွက်အကြွေးများစွာပေးဆပ်ခဲ့ပါက၎င်းသည်အခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည် အန်တိုနီယို gaudi၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကဲ့သို့အမျိုးစုံရကဲ့သို့သောဗိသုကာစတိုင်ဖန်တီးသူပေမယ့်အမြဲတမ်းထူးခြားသော။ သူ၏သင်ကြားမှုနမူနာများစွာသည် Ciudad Condal တွင်ကျန်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများအစုတခုတက်ပါစေ ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်.
ဤအံ့ဖွယ်အမှုများထဲမှတစ်ခုသည်သင်သွားရောက်လည်ပတ်ရမည် Sagrada Familiaဘာစီလိုနာ၏အထိမ်းအမှတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂွတ်ဒီသည်မိမိဘဝကိုအပြီးသတ်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊ သင်တို့မူကားကိုလည်းကြည့်ရှုရန်ရှိသည် မီလာအိမ်လူကြိုက်များသော La Pedrera ဟုလူသိများသည်; က Batllóအိမ် နှင့် Guell ပန်းခြံ, အဘယ်သူ၏ပုံစံများကိုသဘာဝအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေကြသည်။
ဘာစီလိုနာတွင်လည်းပြတိုက်များပေါများသည်။ အတိအကျပြောရရင်ပန်းခြံထဲမှာမင်းမှာမင်းရှိနေတာပဲ Gaudíအိမ်ပြတိုက်, ဘယ်မှာသင်ပိုကောင်းဒီအေးမြကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသိရန်နိုင်ပါတယ်။ မနည်းအရေးကြီးသောဖြစ်ကြသည် ပီကာဆိုပြတိုက် နှင့် Joan Miróနှင့် Antoni Tàpiesထံအပ်နှံထားသောအုတ်မြစ်များ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Montjuic တောင်ပေါ်တွင်သင်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်နှင့် the တွေ့လိမ့်မည် သဘာဝသိပ္ပံပြတိုက်အဆိုပါ Eixample အတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားတ ဦး တည်းရှိနေစဉ် ကက်သလစ်မော်ဒန်။ သင့်တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဘာစီလိုနာသမိုင်းပြတိုက်နှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပြတိုက်လည်းရှိသည်။ ဥပမာ၊ အလိုအလျောက်စက်များ၊ အမွှေးနံ့သာ၊
ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသည့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများအားလုံးသို့သွားရောက်ခြင်းအပြင်ဘာစီလိုနာတွင်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြားအရာများစွာရှိသည်။ သင်သည်ကလေးများနှင့်အတူခရီးသွားနေပါကသူတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် Tibidabo အပန်းဖြေဥယျာဉ်စပိန်အတွက်အသက်အကြီးဆုံး။ သင်ကွဲပြားသောခရီးတစ်ခုကိုသွားလိုပါက Plaza del Doctor Andreu မှအပြာရောင်လမ်းရထားမှထွက်ခွာသွားသည့် funicular တွင်သင်သွားနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တစ် ဦး ဝယ်ယူရန်နှင့်ကောင်းသောငွေရှိလိုလျှင်, အတွက် Paseo က de Gracia မင်းမှာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်များဆိုင်များနှင့်အတူ "ရွှေမိုင်" တစ်ခုရှိတယ်။ သို့သော်၊ သင်သည်ပုံမှန်ထက် ပိုမို၍ စျေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုကိုနှစ်သက်ပါကမတူကွဲပြားသောနေရာကိုလည်ပတ်သင့်သည် စျေးကွက် ဥပမာမြို့တော် Santa Caterina ။
ဘာစီလိုနာတွင်ကြွယ်ဝပြီးမတူကွဲပြားသော gastronomy ရှိသည်။ ကာတာတိုသည်ဘာစီလိုနာမှဟင်းလျာများနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်ရိုးရာနှင့်ကမ္ဘာကျော်စားသောက်ဆိုင်များတွင်တွေ့ရသောအသစ်သောဟင်းလျာ၏အရေးအကြီးဆုံးသောဥယျာဉ်ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဂန္တ ၀ င် starter တစ်ခုအနေဖြင့်သင်နာမည်ကြီးကိုစားရမည် ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူတိုင်းပြည်မုန့်။ ဒါမှမဟုတ်သင်လည်းမျိုးကွဲတစ်မျိုးကိုစမ်းကြည့်နိုင်တယ် ကိုကာကိုလာအတွက်ပီဇာနှင့်ညီမျှ အီတလီ gastronomy.
ပြီးတော့ဒါဟာပုံမှန်ပန်းကန်ဖြစ်ပါတယ် အဖြူပဲနှင့်အတူဝက်အူချောင်း ဟုခေါ်ကြသည် တောင်ကြီးမြို့ ဇုန်၌တည်၏။ အလွန်လူကြိုက်များလည်းဖြစ်ပါတယ် escudellaဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ကြက်၊ အမဲသား၊ အာလူးနှင့်ကုလားပဲအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောဟင်းချို၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်ဥ၊ parsley နှင့်ပေါင်မုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကြီးမားသော meatball ဘောပင်ဖြစ်သည်။
သင်တို့သည်လည်းတွေ့လိမ့်မည် suquet de peixအာလူးနှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများပါသောစွပ်ပြုတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ နှင့်အညီ, ထိုနည်းတူ, ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည် calcots (ကြက်သွန်အမျိုးမျိုး) romesco ငံပြာရည်နှင့်အတူ။
ကွဲပြားခြားနားသည် လှော်ငရုတ်ကောင်းသုပ်သံလွင်ဆီနှင့်ရှလကာရည်နှင့်ရောထားသည့်ငရုတ်ကောင်း၊ သာ။ ကွီးမွတျအင်အားရှိပါတယ် fricandó ငံပြာရည်နှင့်အတူမှိုနှင့်အမဲသားတစ်စွပ်ပြုတ်။ နှင့်အချိုပွဲအဘို့, သင်ကောင်းတစ် ဦး ကိုလက်လွတ်မနိုင် ကက်တလန်မုန့်စပိန်ရှိအခြားနေရာများမှ custard နှင့်ဆင်တူသည်။ သူတို့ကတစ် ဦး ထက်ပိုသောမူရင်းအမည်ရှိပေမယ့် သီလရှင် (nun farts)၊ ဘာစီလိုနာတစ်ခွင်၌သင်တွေ့ရမည့် cookies အချို့။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ဘာစီလိုနာသည်သင့်ကိုကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ သင်ကအားလုံးကိုပျော်မွေ့ရန်ရက်ပေါင်းများစွာလိုအပ်လိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်များကိုသင်နားထောင်ပါကသင်၏အလည်အပတ်ခရီးသည်နာမည်ကြီးကာတာလန်မြို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုသိရန်ခွင့်ပြုသည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ဘာစီလိုနာမှာဘာလုပ်ရမလဲ ဘာစီလိုနာသို့သင်၏လည်ပတ်မှုအတွက်အခြေခံလမ်းညွှန်